Nezvedu - Quanzhou Morton Machinery Co., Ltd.
Morton Machine kambani nekuda kweruzivo uye kuzvipira kwevashandi vedu.Isu tine hudzamu hweruzivo rwekupa rutsigiro mune angangoita chero mamiriro ezvinhu; kubva pakusarudzwa kwezvinhu zvakasvibirira, kudzidziswa, komputa system uye kugadzirisa muchina pasaiti kusvika kune tsigiro yehunyanzvi uye sevhisi.
Tinogona kubatsira kuita kuti bhizinesi rako rive nani.
Morton Machine inotsigira budiriro yevatengi vedu uye vamiriri nekuendesa mhando yekuruka muchina uye zvikamu munguva uye nehana, uye kuchengetedza hukama hwakavimbika uye hune hunhu kune wega wega.
Kutarisa kune zvakadzama
Edza zvinhu zveodha yega yega uye chengeta rekodhi kuti uone.
Zvikamu zvese zvakaiswa mustock zvakatsvinda, muchengeti wemasheya anonyora zvinyorwa zvese zvekunze uye instock.
Tora rekodhi yezvese maitiro uye zita revashandi, anogona kuwana munhu ane mhosva yedanho.
Yakanyatso bvunzo yemuchina usati waendesa pamushini wega wega.Chirevo, mufananidzo uye vhidhiyo zvichapihwa kune mutengi.
Chikwata chehunyanzvi uye chepamusoro chakadzidza tekinoroji, tambo yakamiswa ndiyo hunyanzvi hwedu hutsva, kuita kwepamusoro kusamira, kuita kwakanyanya kusingaite.
Warranty nguva ndeye 1 gore, waranti mutemo inotumirwa mune yakaparadzaniswa email.
VIP sevhisi yako
Hapana diki odha, hapana mutengi mudiki, mutengi wese ndiye VVVIP mutengi kwatiri.
Kwete chete mutengi kutenga zvakare bhizinesi shamwari.Morton ichapa rutsigiro rwakazara kune rako bhizinesi kuwedzera.
Kurumidza sevhisi: 24h online sevhisi pindura mibvunzo yako panguva yekutanga.
Kotesheni uye sarudzo ichapihwa nekukurumidza sezvinobvira kana wawana kubvunza kwako.
Zano reunyanzvi: zvinoenderana nemamiriro ako ekushanda, isu tinopa akanyanya akakodzera sarudzo dzesarudzo yako, uye tinoomerera kukupa yakasarudzika kugadzirwa kwako.
Kukurukurirana kwakanaka: Vakadzidzwa vekutengesa vasikana vese vane Chirungu Giredhi Certification.
Zvirokwazvo kana uchitaura chiRussian, chiFrench kana chiSpanish, vashanduri vedu vakasiyana vanokupa masevhisi epamoyo.
Chiitiko cheBhizinesi: Zvese zvinotengeswa zvine anopfuura makore matatu ruzivo rwekutumira kunze, ruzivo nemutemo wekutumira kunze kwenyika uye hurongwa hwekupinza kwenyika, hunobatsira iwe kuita mvumo yemutengi uye maitiro ekunze zvakanaka.